Total video converter နဲ့ ring tone, mp3,mp4 ပြောင်းကျမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Total video converter နဲ့ ring tone, mp3,mp4 ပြောင်းကျမယ်
Total video converter လေးဟာ phone, mp3, mp4 စတဲ့ ပစ္စည်းများထဲကို ရုပ်ရှင်များ၊ ring tone များ၊ mp3 သီချင်းများ ပြောင်းပေး တဲ့ နေရာမှာ အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက Install လုပ်ပြီးရင် serial no ကို အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အကွက်ထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။
Total video converter ကို ဖွင့်လိုက်ပါက ယခုလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ save folder ဆိုတဲ့နေရာလေးဟာ ကိုယ်ပြောင်းထားတဲ့ file သိမ်းချင်တဲ့ နေရာလေးကို ရွေးရပါတယ်။ ဥပမာ desktop ပေါ့။ new task ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Import file ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ file ကို သွားရွေးပါကအောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
phone, mp3, mp4 အမျိုးစားများပေါ်မူတည်ပြီး file format တွေဟာမတူညီကျပါဘူး။ အများဆုံးသော format တွေကတော့ ရုပ်ရှင်ထည့်ချင်လျှင် mp4, 3GP စတဲ့ format တွေဟာ ဖုန်းတော်တော်များများ၊ mp4 တော်တော်များနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်းထဲကို သွင်းချင်ရင်တော့ အပေါ်ဆုံးက ဖုန်းပုံစံဘေးမှာ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ format ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ဒုတိယကတော့ mp4 တွေအတွက်ပေါ့။ တတိယကတော့ အင်တာနက်ပေါ်တင်တဲ့ အခါမှာသုံးပါ။ flash file format အဖြစ်သုံးလို့ ရပါတယ်။ စတုတ္ထကတော့ DVD, VCD တွေပြောင်း ချင်ရင်သုံးပါ။ ပဉ္စမကတော့ apple computer နဲ့ apple ပစ္စည်းများမှာသုံးပါ။ ရုပ်ရှင်မှ ဓါတ်ပုံ ပြောင်းချင်ရင်တော့ jpeg ကို ရွေးလိုက်ပေါ့။ ဆဌမကတော့ mp3 နဲ့ audio file အမျိုးမျိုး အတွက်ပါ။ ကိုထည့်ရမယ့် file format ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ကိုယ်ပြောင်းချင်သော file များ အားလုံးကို ရွေးပြီးသောအခါ convert now ကို နှိပ်လိုက်ပါက အောက်မှာ ပြထားသော ပုံသဏ္ဍန်မျိုးမြင်ရင်ခဏ စောင့်ရပါမယ်။
ပြီးသွားလျှင် ကိုယ်သိမ်းဖို့ရွေးခဲ့သောနေရာကို သွားဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါက ပြောင်းထားပြီးသား file များကို တွေ့ရပါမယ်။ အလွယ်တကူ copy ကူးပြီး ကိုယ့်ဖုန်းထဲ၊ mp4, mp3 ထဲ ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
total video converter software လေးကို ဒီမှာတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး၊ serial no ပါတဲ့အတွက် window7နဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ အောင်မိုးထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ထာဝ၇အလင်း, မိုးတိန်, သန်းဇော်လင်း, သန့်ဇင်ဌေး, arkaraung, bagothar85, g00gle, lumpuk, nyilinnge, phyomyintthein, PyaitSone, sAnDViper, thein zaw min, whiteman, zo
14-01-2012, 11:49 AM
ပြန်စာ - Total video converter နဲ့ ring tone, mp3,mp4 ပြောင်းကျမယ်
အကို ကျနော် စက်မှာ Aiseesoft HD converter တင်းထားတာ အဲဒါ video ဖောင်ိ့ ပြောင်းလိုက် ရင် 5မိနစ် ရှိရင် 2မိနစ် ခွဲ ပဲ ပါတော့တယ် 10 မိနစ်ရှိရင်5မိနစ် ပဲ ပါတယ် အဲဒါ အကုန်လုံးပါ အောင် ဘယ် လို လုပ် ရင် ရ လည်း အကို ပြောပြ ပါ ဦးနော် အားကိုပါ တယ် ကျေူးဇူးပါ နော် အကို
14-01-2012, 06:51 PM
အဲ့ဒီ Converter က Full Version မဖြစ်လို့ ဖိုင်တွေ ပြောင်းတဲ့ အခါမှာ အပြည့်အ၀ မရဘဲ တ၀က်ပဲ ပြောင်းပေးတာပါ
Converter Full Version တွေကို ဒီနေရာလေးမှာ အများကြီးတင်ထားပေးထားပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘော်ဒါတို့ ကျနော်ကို video တွေ ရုပ်ထွက် မကောင်း တာ တွေကို ကိုယ်က ပြန်ပြီ ကောင်းအောင် ရုပ်ထွက်ဖြစ်ချင်တာ ကို ကျနော်software တွေ တော်တော်များ သုံးကြည့် တာ အဆင်မပြေလို့ ကျနော်သုံးတယ် software တွေက toatal converter xilisoft converter aissesoft total converter သုံးတာ အဆင်မပြေ သေးလို့ ကျနော်ကူညီပါဦးနော် ရုပ်ထွက်မကောင်းတွေကို ကိုယ်က ပြန်ပြီ ကောင်းအောင် ပြုပြင်ချင်တာ အဲဒါ ဘယ်လို software မျိုး နဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေတယ် software လေး ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ ဘော်ဒါတို့ နော် အားကိုပါတယ် ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်နော်
SONY Vegas Pro 10.0e Build 737 software လေးကို mediafire လေးနဲ့တင်းပေးပါ နော် ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်
Originally Posted by မျိုးကြီး
January 19, 2012 ရက်နေ့က ထွက်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်း Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ရဲ့ Patch Keygen လေးကို တွေ့လို့ အဲဒါကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု Keygen က Sony ရဲ့ Product တော်တော်များများကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Software က ဖိုင်ဆိုဒ်တော်တော်ကြီးနေလို့ Mediafire က တင်မပေးလိုက်တော့ပါဘူး။ အဲဒါ သူ့ဆိုက်ကနေ Download နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆင်မပြေခဲ့ယင်တော့ ပြန်ပြောပေးပါ။ ကြိုးစားပြီး ပြန်တင်ပေးပါမယ်။ အစ်ကို့စက်က 32-bit ဆို 32-bit အတွက်၊ 64-bit ဆို 64-bit အတွက် တခုပဲဒေါင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ Keygen ထဲမှာ Readme ဖိုင်တခုပါ,ပါတယ်။ အဲဒီထဲကအတိုင်း တဆင့်ချင်းစီ သေချာလိုက်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သေချာလုပ်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ တခုခုလွဲချော်ခဲ့ယင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါ။ အဲဒါလေးကို သေချာဖတ်ပြီးလုပ်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
$ညိုမင်းလွင်$, မိုးတိန်, အောင်ဗလ, thureinsoe, zo
ဘော်ဒါတို့ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software က regi....လုပ်ခိုင်းနေတာ ကျနော်က အင်တာနတ် မချိတ်ထားတော့ ဘယ် လို အင်စတော့ လုပ်ပြီ သုံးလို့ ရမှာလည်း သုံး လို့ ရ အောင် နည်နည် လောက် ရှင်းပြပါ ဦး Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) က လိုင်စင် နဲ့ လား free လား ဘော်ဒါတို့
14-02-2012, 11:56 AM
ဘော်ဒါ တို့ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software က ကျနော် အင်စတော့ လုပ်ပြီးတော့ သူရဲ့ serial nunber code
1T4-4S93-YJYB-XGSJ ထည့်ပြီတော့ သူက regis......လုပ်ခိုင်းနေတာ ကျနော်က အင်တာ နတ် လိုင်းမရှိတော့ ဘယ်လို လုပ်ပြီရမှလည်း အကို ကျနော် Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software ကို သုံး လို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလည်း အကို နဲနဲ လောက် ရှင်းပြ ပါ ဦး အားကိုပါတယ် အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိသာစု အကို
အကိုရေ ကျွန်တော် Portable ဗားရှင်းတွေကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...............
Sony Vegas Pro 11 Build 370-371 & Portable
15-02-2012, 11:16 AM
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software ကို ကျနော်က အင်စတော့ လုပ်တော့ သူ က သူရဲ့ serail number နံပါတ်ထည့်ပြီတော့ software က regi .....လုပ်ခိုင်းနေတာ အဲဒါ ကျနော် က အင်တာနတ် လိုင်းမရှိတော့ regi မလုပ် ပဲ နဲ့ သုံးလို့ ရ အောင် နဲနဲ ရှင်းပြပေးပါလား ဘော်ဒါ နော်အားကိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1T4-4S93-YJYB-XGSJ ထည့်ပြီတော့ သူက regis......လုပ်ခိုင်းနေတာ ကျနော်က အင်တာ နတ် လိုင်းမရှိတော့ ဘယ်လို လုပ်ပြီရမှလည်း အကို ကျနော် Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software ကို သုံး လို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလည်း အကို နဲနဲ လောက် ရှင်းပြ ပါ ဦး အားကိုပါတယ် အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိသာစု အကို
ကိုမျိုးကြီး ခင်ဗျာ... ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို Install ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ သွားကြည့်ပြီး တဆင့်ချင်းစီကို ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်း သေချာလုပ်ပါ။ ကိုမျိုးကြီး အခုလက်ရှိတင်ထားတဲ့ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကိုလည်း ပြန်ပြီး Uninstall ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစ်ကိုက Serial ကီးတွေ၊ဘာတွေ ထည့်ပြီးသွားတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းလုပ်ယင် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Uninstall ကိုလည်း ကျွန်တော် ဟိုပိုစ့်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ Uninstall ပြုလုပ်ပြီးမှ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို အသစ်ပြန် Install လုပ်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ ကိုမျိုးကြီး....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) software က လိုင်စင်ကြီး နဲ့ မို့လား အကို FREE မဟုတ်တော့ ကျနော် အတွက် အဆင် မပြေဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ ကျနော်ကို CONVERTER SOFTWARE ကို FREE ဖြစ်မယ် SOFTWARE လေးကို နောက်ပြိတော့ VIDEO ဖောင့် တွေ ကို ပြောင်းလို့ ရမယ့် အလင်း အမှောင် ချိန် လို့ ရမယ့် SOFTWARE လေး ကို MEDIAFIRE တင်းပေးပါနော် FREEဖြစ်မယ့် SOFTWARE လေးကို တင်းပေးပါ နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော် သုံး လားတယ် SOFTWARE အများကြီး သုံူးလာတယ် FORMAT FACTORY ANY CONVERTER XILISOFT VIDEO CONVERTER TOTAL CONVERTER အဲဒီ SOFTWARE တွေ သုံးတာ သိပ် အဆင်ပြေလို့ ပါ အကို အားကိုပါတာယ်နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း
ကျနော်ကို xilisoft software ကို အခဲမဲ့ သုံးလို့ ရမယ် နောက်ပြီတော့ regist.....code မပါစေနဲ့ အဲဒါတွေက ရှုပ်လို့ပါ အခမဲ့ သုံးလို့ ရမယ့် xilisoft software ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော်
Originally Posted by ယုယအောင်
ကျနော်ကို xilisoft software ကို အခဲမဲ့ သုံးလို့ ရမယ် နောက်ပြီတော့ regist.....code မပါစေနဲ့ အဲဒါတွေက ရှုပ်လို့ပါ အခမဲ့ သုံးလို့ ရမယ့် xilisoft software ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုယုယအောင်ခင်ဗျာ... Xilisoft softwares တွေဟာ အခမဲ့ ပေးတဲ့ဟာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းနေတာတွေပါခင်ဗျာ... အနိမ့်ဆုံး Software ဟာ မြန်မာငွေနဲ့ ၂သောင်းလောက်ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ၂သောင်းတန်လောက်ကို ပိုက်ဆံမပေးဘဲ သုံးချင်ယင်တော့ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်မှာပေါ့ အစ်ကိုရယ်... အရှင်းဆုံးပြောရယင်တော့ အဲဒီဆော့ဝဲတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေက ခိုးပြီး သုံးနေရတာပါ။ အဲဒီတော့ အခက်အခဲတော့ ရှိတာပေါ့ အစ်ကို... အစ်ကို အခမဲ့ သုံးချင်ယင်တော့ အဲဒီဆိုက်က Trial ဆိုတာတွေကို ဒေါင်းပြီးသုံးယင် ၁၅ရက် အခမဲ့စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ အဲဒါမှ မဟုတ်ပဲ Free(အခမဲ့) ပေးတာကိုပဲ သုံးချင်ယင်တော့ Format Factory ဆိုတာကို သုံးကြည့်ပါ။ အဲဒါက အခမဲ့သုံးလို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ ပေးသုံးတာတွေကို ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်သုံးရတာတွေလောက် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံဖို့တော့ မျှော်လင့်လို့ မရဘူးပေါ့နော်... အခမဲ့ ပေးတာတွေက အခမဲ့ ပေးတာလောက်ပဲ ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ.....
မိုးတိန်, arkaraung, g00gle, zo
video တွေကို edi ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီချင်တာ video တွေကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ထည့်ပြီ နောက်ခံ မှာ ကိုယ်ကြိုက်တယ် သီချင်းထည့်ချင်တာ မြန်မာ စာ တန် ထည့်ချင်တာ ကိုယ်တိုင် edi လုပ်ချင်တာ အဲဒါ ဘယ်လို software မျိုးကို သုံးရင်ရလည်း
ရတယ် software ကို mediafire လေး နဲ၊့ တင်းပေးပါနော် နောက်ပြီတော့ အဲဒီ software က အခမဲ့ သုံးလို့ ရမယ်နော် အကို လိုင်စင်
ဘာရှင်းမပေးပါ နော် free လေး ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါနော် ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ယုယအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လေးစားချစ်ခင်ရပါသော ကိုယံဝါအောင်ရေ အကိုပြောတဲ့ video တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး နိုင်မဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေ ဒီနေရာမှာအများကြီး တွေ့ပါတယ်အကို အဆင်ပြေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်သွားနိုင်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးတိန်, arkaraung, g00gle, yemyatlin, zo
ကျနော် power dvd 12 အဲဒါ အင်စတော့ လုပ်တာ မရလို့ ဖြစ်နေလို့ ကူညီပါဦး power dvd 12 software ကို အင်စတော့ လုပ်တာ ကျနော် အန်တီဗိုင်းရပ် ကို ပိတ်ထားပြီ အင်စတော့ လုပ်လည်း မရဘူးဖြစ်နေလို့ ပါ အင်စတော့ လုပ် လိုက်တာ နဲ့ This installation cannot be run by directly launching the MSI package.You must run setup .exe.
corel video studio pro x4 v14
အဲဒီ စာတန်း တတ်လာတာ ကျနော်ကို ကူညီပါ ဦးနော် အင်စတော့ လုပ်ပုံ လေး ကို ရှင်းပြပေးပါဦးနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ပြီတော့ corel video studio pro x4 v14 series number နံပါတ်လေး ကို ပြောပြ ပေးပါနော် ကျေးဇူးးတင်ပါတယ်
15-03-2012, 06:51 PM
အကို တို့ ကျနော် မေးတာ ဖြေပေးပါဦးနော် ကျနော် power dvd 12 အဲဒါ အင်စတော့ လုပ်တာ မရလို့ ဖြစ်နေလို့ ကူညီပါဦး power dvd 12 software ကို အင်စတော့ လုပ်တာ ကျနော် အန်တီဗိုင်းရပ် ကို ပိတ်ထားပြီ အင်စတော့ လုပ်လည်း မရဘူးဖြစ်နေလို့ ပါ အင်စတော့ လုပ် လိုက်တာ နဲ့ This installation cannot be run by directly launching the MSI package.You must run setup .exe. တတ် လားပြီ အင်းစတော့ က လုပ် လို့ မရလို့ ဖြစ်နေလို့ပါ အကို ကျနော် အင်းစတော့ လုပ်လို့ ရအောင် နည်း ကို ရှင်းပြပေးပါ ဦးနော် အားကိုပါရ့စေ နော် ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်
18-04-2012, 07:26 PM
factory software နဲ့ mpeg တို့ avi တို့ ပြောင်းတာ မ ရလို့ အဲဒါ နဲ့ မရလို့ ဆိုပြီ Allok 3gp psp mp4 ipod video converter software နဲ့ ပြောင်းလည်း မရလို့ ရအောင် ဘယ် လို ပြောင်း ရ သလည်း သယ်ရင်း တို့ ပြော ပြ ပေးပါဦးနော် ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
18-04-2012, 07:29 PM
ကျနော် စလောင် စက်က ကူးတယ် video လေး က REC PVR ဖိုင်လေး နဲ့ video တစ်ခု ဆို ရင် 4ခု ပါတယ် အကွတ်လေး တွေ ပါတယ် အဲဒါ format
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2012
ပို့စ် 63 ခုအတွက် 269 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
format factory software လေးလည်းကောင်းပါတယ်
ဒီလင့်လေးမှာ သွားဒေါင်းပြီး သုံးကြည့်ကြပါလား
Find More Posts by ကောင်းပြည့်
Youtube ချစ်သူများ အတွက် မသိမဖြစ် KznT Websites များနှင့်ပတ်သက်၍ 22 18-09-2012 08:13 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 04:56 AM